အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Apple က iPhone ကို6နောက်ထပ်: ဒါဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်ကြောင့်ကြီးမြတ်ခံစားရ – ပြန်လည်သုံးသပ်မှု” ချားလ်စ်အာသာကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 17 စက်တင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2014 19.07 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သိပ်ကြီးမားတဲ့. ဤအမှုသည်လည်းကြီးမားသောင်. Waaay လည်းကြီးမားသော. င်း… တကယ်တော့, က screen ကိုတော်တော်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်မဖြစ်? ဝိုး, သင်အမှန်တကယ်ရှိအပေါ်အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရနိုင်, သငျသညျမတတျနိုငျ? ဟေး, ငါ့လက်ကိုရဲ့အရွယ်အစားဖို့အသုံးပြုတဲ့. ဒါဟာအတော်လေးအဆင်ပြေရဲ့, ဒါကြောင့်မဖြစ်?
ထိုကြောင့်အိုင်ဖုန်းနှင့်အတူတတ်ပုံကိုဖွင့်6နောက်ထပ်. ငါကဝေးလွန်းကြီးတွေကိုရှာဖွေရန်မျှော်လင့်, နှင့်ပထမဦးဆုံးမှာကိုငါ့မျှော်လင့်ခဲ့သည်. သို့သော်ထိုသို့မိနစ်အနည်းငယ်ပေး, ကာလ၏ဖြစ်ကောင်းစုံတွဲတစ်တွဲ, နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ထူးဆန်းက၎င်း၏ကြီးမားသော-ပေုံမျက်နှာပြင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်.
"phablet", အ 5.5in အဖြစ် (14 စင်တီမီတာ)-ပေါင်းမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားဖော်ပြခဲ့သည် (မှရယူထားခြင်းဟန်သော ဇွန်လအတွက်ဖြစ်သူ Scott Webster 2010, ထို့နောက်တစ်ဦး 7in Huawei က device ကိုမှရည်ညွှန်း), ပို. ပို. လူကြိုက်များ. အာရှနှင့်အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာ, သူတို့ကအရမ်းလူကြိုက်များနေ, လျော့နည်းဒါကြောင့်အမေရိကန်နှင့်အများကြီးလျော့နည်းဒါကြောင့်ဥရောပ၌သော်လည်း. သူတို့ကအကြောင်းဖွင့်ပါစေ 15% ရောင်းအား, ကန့်ပေမယ့် ကြီးထွားလာအစာရှောငျ.
မှစ. 2011, Samsung က Galaxy Note အကွာအဝေးနှင့်အတူသူ့ဟာသူမှ High-end Phablet ကိုစျေးကွက်ကရှိခဲ့ပါတယ်, ယခု၎င်း၏စတုတ္ထမျိုးဆက်အတွက်. အခုတော့, ဒါကြောင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပါတယ် – နှင့် Apple တို့အမှတ်တံဆိပ်ဆိုးဆိုးရွားရွားသူ့ရဲ့တောင်ကိုရီးယားပြိုင်ဘက်ရဲ့ရောင်းအားဖြစ်လာဖို့ကိစ္စကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်.
အ 4.7in iPhone ကိုနှိုငျးယှဉျ 6, ထို6Plus အားမကြာမီသူတို့ကိုသင်နားမှာဘက်ကြိုးစားသောအခါစိတ်ပျက်ဖွယ် feeling ရပ်လိုက်. ငါခဏခဏငါပိုကြီးမျက်နှာပြင်များအတွက်ရောက်ရှိမယ်လို့တွေ့ရှိ, ရှေးခယျြပေးသော, သင်ကအပေါ်အများကြီးပိုဖတ်နိုင်မယ့်အကြောင်းကြောင့်.
အဆိုပါဘက်ထရီသက်တမ်းလည်း သာ. ကောင်း၏ (ဖုန်းရဲ့အချိုးကျပိုပြီးဘက်ထရီပါဝင်ပါသည်); ထိုသို့အတူတူပင်နှစ်သက်ရှိပါတယ်, ၏ rounded ခံစား 6.
အဆိုပါနှိုင်းယှဉ်လျှင်နောက်ဆုံးနှစ်တွင်၏ Galaxy Note ကိုဆန့်ကျင်အထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းဖြစ်လာ 3, သော 5.7in ရှိပါတယ် (14.5စင်တီမီတာ) 1920 မှာ screen ကို×1080 pixels ကို. အဆိုပါ Note ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနီးပါးအတိအကျတူညီအရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ chrome-ရှေ့ကနေ – ယခုဆိုးဆိုးရွားရွား retro ကြည့် – တစ်ဦးကြွက်နို့ကဲ့သို့ကင်မရာ. အဆိုပါ iPhone ကို6Plus အားကင်မရာကလည်းထွက်ကပ်လျက် – တစ်ခုလုံးကိုမီလီမီတာ – ဒါပေမဲ့ရူပသို့မဟုတ်ခံစားမှုမျှနှိုင်းယှဉ်ရဲ့.
• Screen ကို: 5.5တွင်, 1920×1080 401ppi LED; 1300:1 နှိုင်းယှဉ်အချိုးအစား
• processor: M8 ကအဆိုကို coprocessor ​​နှင့်အတူ A8 64-bit နဲ့က ARM
• ရမ်: 1GB ကို
• သိုလှောင်ခြင်း: 16GB ကို, 64GB ကို, 128GB ကို
• ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: iOS ကို 8
• ကင်မရာကို: ပြန်.: 81.5micron pixels ကိုအတူအမတ်, f2.2, optical image stabilization, 240fps ဗီဒီယို, နီလာမှန်ဘီလူးအဖုံး, Auto-HDR, မျက်နှာထောက်လှမ်း, 43--megapixel မြင်ကွင်းကျယ်, ပြင်းစွာတိုက် mode ကို 10fps; 108030fps သို့မဟုတ် 60fps မှာ p ဗီဒီယို. ရှေ့ကင်မရာ: 1.2အမတ် (1280×960), f2.2, 720p HD ကို, ပြင်းစွာတိုက် mode ကို.
• connectivity ကို: LTE ကို, Wi-Fi ကိုa/b/ g / n / ac, ဘလူးတုသ် 4.0 BLE နှင့်အတူ, NFC ကို; VoLTE ထဲက (LTE ကိုကျော်သောသူ၏အသံ) စွမ်းအားခြင်း, Wi-Fi ကိုခေါ်ဆိုခအပြောင်းအလဲစွမ်းရည်
• ဒိုင်မန်းရှင်း: 158.1 x က 778 x က 7.1mm
• အလေးချိန်: 172ဂရမ်
• အခြားသူများ: အဲဒါကလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ; ApplePay များအတွက် NFC ကိုငွေပေးချေမှုစွမ်းရည်
အဆိုပါ6Plus အား optical image stabilization ရှိပါတယ် (OIS) – ထိပ်တန်းအဆုံးကို Nokia ၏ရှည်လျားသောအဓိက (ယခု Microsoft က) Lumia စမတ်ဖုန်း – ရွေ့လျားစဉ်ယူဇာတ်ကားတွေဆတ်တောက်ခြင်းမဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်အောင်. Instagram ကိုရဲ့ Hyperlapse ပထမဦးဆုံးရှိတယ် (အ gyroscope အပေါ်တောင်းဆို), ဒါပေမယ့်6Plus အားလည်း 240fps နှေးကွေး-motion ရိုက်ကူးရေးထည့်သွင်း; ဤစက်ကိရိယာသစ်ကိုအလင်းခရီးသွားလာကြိုက်နှစ်သက်သူကိုဓာတ်ပုံဆရာတို့တှငျ "-ရှိရမည်" ဖွစျဖို့မြျှောလငျ့.
အများစုက apps များသစ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အဖြစ်ပြန်ပြောင်းရေးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်, သောက Apple ရဲ့စာသားကို system ကိုမသုံးကြဘူးကြောင်း apps များအတွက်စာသားမ inflates သော်လည်းအဖြစ်ခံစားရ. တဖန်, အိုင်ဖုန်း၏ 4in screen ပေါ်မှာစာသားကိုဖတ်မှရုန်းကန်သောသူတို့အား5အပိုက​​ြိုဆိုပါတယ်လိမ့်မည် 88% မျက်နှာပြင်အိမ်ခြံမြေ၏. Apple ကလည်းတကယ်သင်ကအားလုံးကိုကျော်တစ်ဦးမှန်ဘီလူးပါးရိုက်ချင်ပါတယ်သော်လည်းအဖြစ်အရာအားလုံးကိုတက်သွားတတ်ကြောင်း "ချဲ့" ကြည့် setting ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် – "အဘိုးဘိုး setting ကို", သင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်.
အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်ချဲ့ display ကို6နှင့်6Plus အား icon များနှင့်စာသားကျယ်ဝန်း ဓါတ်ပုံ: ဂေါကလူကြီး
အအလွန်ကြီးမားသောမှနောက်ထပ်လိုက်လျောကို "Two-ကိုထိပုတ်ပါ" အမူအရာသည်: ကို double-ကိုထိပုတ်ပါပေါ့ပေါ့တန်တန်အိမ်တွင်ခလုတ်ကို, နှင့်ပုံတူ mode မှာ screen ရဲ့ထိပ်က်အမှတ်အသားမှဆငျးသကျ slides, သင်သည်သင်၏လက်အနေအထားကိုချိန်ညှိခြင်းမရှိဘဲမျက်နှာပြင်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုရောက်ရှိနိုင်အောင်.
Apple ရဲ့အခြား Tweak, အထူးသဖြင့်အဘို့6နောက်ထပ်, အိမ်တွင်မျက်နှာပြင်ရှုခင်း mode သို့လှည်အခါကဖြစ်ပါသည်, ထို dock ဘေးထွက်ဖို့လှုံ့ဆျော; မေးလ် app ထဲမှာ, သငျသညျမှာ "နှစ်ဦး-up 'အမြင်အရ, လက်ျာအပေါ်လက်ဝဲနှင့်ခန္ဓာကိုယ်စာသားကိုအပေါ်ကိုအီးမေးလ်ခေါင်းစီးများနှင့်အတူ. အခြား app များဖြစ်နိုင်ဒီအမြတ်ထုတ်အတွက်ဝတ်စုံလိုကျပါမညျ.
Samsung က, ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ထိုမှတ်ချက်အပေါ်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားတဲ့ user interface ကို tweaks ကမ်းလှမ်း: လက်ဝဲဘက်မှာ menu ကို switching တစ်ဦးအမြန် app ကိုအဲဒီမှာဖွင့်, သငျတို့သညျလညျးအခြိနျမှာ app နှစ်ခုကို run နိုင်ပါတယ် (အသီးအသီးအရွယ်အစားပြောင်းရန်). ဒီ app switcher ပဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောဖြစ်ပါသည်, နှစ်ခု-up က configuration ကိုရှင်းလင်းစွာအလားအလာအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်သော်လည်း (ပွောဆို, မြေပုံမှာရှာဖွေနေစဉ်စာတိုပေးပို့ရေး). Samsung ကလည်းတစ်တံရှိပါတယ် – ငါကသာအသုံးပြုင်အကြံပြုကြောင်းပြည်တွင်းရေးဒေတာကြားဖူးတယ်သော်လည်း 10% ထိုအချိန်ကာလ၏, အလှည့်ထဲမှာမှတဆင့် Apple အတွက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းဆိုလိုသော 90%.
ထိုအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအရာအတော်များများ6နောက်ထပ် – Widgets တွေ, Third-party keyboards, app ကို-based Workflows ဖန်တီးရန် "extensions တွေကို" – developer များသစ်အရွယ်အစားနှင့်ကသူတို့ကိုကမ်းလှမ်းအလားအလာနှင့်အတူ grips ရအဖြစ်သာနောက်လာမည့်လအနည်းငယ်၌ပေါ်သောသစ်ကို apps များအားဖြင့်ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရလိမ့်မည်. အခုအတွက်တော့, သော်လည်း, ဒါကြောင့်အသုံးနှင့်အတူ ပို. ပို. အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာမယ့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးမားဖုန်းကိုဖွင့်.
အဆိုပါ iPhone ကို6£ 619 ကနေ Plus အားကုန်ကျစရိတ်များ (Inc VAT)/$749 (ဟောင်းအခွန်အခများ) 16GB သိုလှောင်.
အိုင်ဖုန်းအကြားရွေးချယ်ခြင်း6Plus အားနဲ့သေးငယ်တဲ့ iPhone ကို6သင်၏လက်ကိုမယ်ဆိုရင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်, နှင့်သင့်ပိုက်ဆံအိတ်, လုံလောက်တဲ့ကြီးမားသည်. ဒါဟာကြီးမားသည်, သို့သော်လည်းအပိုမျက်နှာပြင်အာကာသအထောက်အကူပြုသည်. ဒါပေမယ့်လည်းဒါဟာ unwieldy စေသည်, ထိုသို့ကျဆင်းနေ၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်ကြောင်း. အခြား phablet နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, စျေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းမ - ကပေါ့ပါးပါးလွှာမယ့်
အကောင်းအဆိုး: ကြီးမားခြင်းနှင့်ပါးလွှာ; တောက်ပသောမျက်နှာပြင်; မည်သည့် iPhone ရဲ့အကောင်းဆုံးဘက်ထရီသက်တမ်း; အပို-ကြီးမားတဲ့ screen ကိုအဘို့အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်; iOS ကို 8 Third-party keyboards ခွင့်ပြု, လုပ်ငန်းအသွားအလာ extensions တွေကိုနှင့် Widgets တွေ
Cons: စျေးကြီး; သငျသညျအထူးသဖြင့်ကြီးမားသောလက်ကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင် unwieldy ဖြစ်စေခြင်းငှါ
• Apple က iPhone ကို 6: ပါးလွှာ, ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးအနည်းငယ်စျေးသက်သာ – ပြန်လည်သုံးသပ်မှု
• iOS ကို 8 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: iPhone နှင့် iPad ကိုစိတ်ကြိုက်မရ, တိုးချဲ့နက်ရ​​ှိုင်းလာ
•ဤအောက်ခြေမှတ်ချက်အပေါ်တှင​​ျနောကျဆကျတှဲဖျောပွခဲ့ 23 စက်တင်ဘာလ 2014. ချားလ်စ်အာသာရဲ့ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်နေရာထိုင်ခင်းကို Apple ကပေးချေခဲ့သည်.